ဖုန်းပေါ်တွင် VC ကိုမှဗီဒီယိုကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - ဖုန်းကို - 2019
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte ကို interface အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့အဖြစ်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်းဖြစ်ပါသည် "Bookmarks"။ ဒါဟာဤအရပ်ဌာန၌မာစတာစာမျက်နှာအားလုံးအစဉ်အဆက်မှတ်သားမှတ်တမ်းများအရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလူအကရေးသားသည်။ ဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းတွင်ငါတို့သည်သင်တို့ကြည့်ရှု bookmarks ကိုအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ရှာဖွေနေ tab ကို VC ကို
ပုံမှန်အားဖြင့်သတိပြုပါ, "Bookmarks" ဒါဟာအသုံးပြုသူမှတန်ဖိုးအရှိဆုံးဆိုအချက်အလက်များ၏သိုလှောင်မှုအတွက်သာရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအချို့စာရွက်စာတမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ ထို့ကြောင့်ပင် bookmark ကိုမှရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမဆိုမှတ်တမ်းများမသတ်မှတ်, သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့အချို့ဓာတ်ပုံများအတွက်လိုပဲလုပ်ပါ။
partition tab ကိုထိုအရပ်မှဒေတာမဖျက်ပစ်၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အပြင်အဆင်များ၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အဓိကအားဖြင့်လူမှုကွန်ရက် VC ကိုအသစ်သူတို့အဘို့ရည်ရွယ်ကတည်းကသင်တစ်ဦး menu ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုလုံးဝပိတ်ထားပါလိမ့်မည်များပါတယ်။ ထိုကြောင့်, သင်ကိုသက်ဝင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Bookmarks" system setting များကိုအရင်းအမြစ်ကတဆင့်။
အပိုင်း "Bookmarks" ၏ Inclusion
သငျသညျထို site VK အသစ်အနေလျှင်ပင်အမှန်သင်ပြီးသားလူမှုကွန်ယက်ကို setting များကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီတကယ်တော့, ဆောင်းပါး၏ဤအပိုင်းက, အနည်းဆုံးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆဲလုပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးဆိုအကြောင်းပြချက်ဆိုပါက "Bookmarks" ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်မရရှိနိုင်, ညွှန်ကြားချက်ကိုကိုးကားပါ။
အိမ်စာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်တွင်သင်တို့၏နာမပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့် VC ကို select လုပ်ပါ "Settings" ကို.
ထို့အပြင်သငျသညျဖွင့်လှစ်ခဲ့ကို default tab ကိုပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင် "အထွေထွေ".
settings ကိုသွားပါရန်, link ကို click နှိပ်ပြီး "မီနူးပစ္စည်းများပြသမှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်".
အထက်ပါလုပ်ရပ်များတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, သင် site ကို VKontakte ၏ main menu ကိုတစ်ခုချင်းစီကို item ၏လက်ဝဲမှပေါ်လာသောဂီယာ၏ပုံရိပ်နှင့်အတူ icon ကို click နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျနီးပါးမည်သည့်စနစ်က partition ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဓိက menu မှာပြသတာဖြစ်ပါတယ် enable သို့မဟုတ် disable နိုငျ menu ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နှင့် ပတ်သက်. အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြားစာများ၏ setting မှပြောင်းလဲအဖြစ်ကဒီမှာတချိန်တည်းမှာ "ဂိမ်းများ" နှင့် "လူထု".
မီနူးဖွင့်လှစ်ခြင်း, tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, "အခြေခံ".
သင်မှတ်ရှာတွေ့အထိဤစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှ scroll "Bookmarks".
အပိုင်း၏နာမတျော၏ညာဘက်တစ်ဦးကို tick အိုင်ကွန်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူသတ်မှတ်မည်။
ခလုတ်ကိုသုံးပါ "Save"main menu ကိုဖွင့်ပြင်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးစေရန်။
အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာပြုလေ၏ရှိလျှင်, အကြောင်းအရာများများ၏စာရင်းထဲတွင်သစ်တစ်ခုကို item ဖွစျလိမျ့မညျ "Bookmarks".
ဤအပိုင်းကို၏ Deactivate တူညီသောလမ်းအတွက်, ဒါပေမယ့်ပြောင်းပြန်အရေးယူအတွက်ဖျော်ဖြေကြောင်းသတိပြုပါရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီး။
ကြည့်ရန် bookmarks ကို
ရုံယူနစ်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအကြောင်းလုံးဝနီးပါးအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်တက်ပါဝါ။ အပိုင်း "Bookmarks" သငျသညျအကြောင်းအရာအချို့မျိုးစိတ်များ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ခုနစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစာမျက်နှာများနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်:
tab ကို "ဓာတ်ပုံများ" သင်တစ်ဦးအမှတ်အသားထားရာပေါ်မှာရှိသမျှပုံတွေကို VC ကို, နေရာချ "ကျွန်မကြိုက်တယ်"။ ဤရုပျပုံကရိုးရှင်းစွာလိုပဲဖယ်ရှားခြင်း, ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဓါတ်ပုံ VK နှင့်အတူပြာဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဓာတ်ပုံစာမျက်နှာနှင့်အတူအတိအကျတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် "ဗီဒီယို" ဒါဟာသင်ဤ site ကို VKontakte အပေါ် posted တစ်ဦးအပြုသဘော rated ဗီဒီယိုများပါဝင်ပါသည်။
အပိုင်း "Entries" ဒါဟာဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများစည်းဝေးပွဲရှိမရှိ, မြို့ရိုးပေါ်မှာ posted နီးပါးအားလုံးရာထူးပါဝင်သည်။
မှတ်စုနှင့်မပြည့်စုံတဲ့ဘလော့ဂ်ရှာဖွေရန်, ကို tick ကိုသုံးပါ "ရုံမှတ်စုတစ်ခု".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: VKontakte သင်အကြိုက်ဆုံးအသံသွင်းကြည့်ရှုဖို့ကိုဘယ်လို
tab ကို "လူတွေက" VK ငျကိုယျတိုငျ bookmarks ကိုမှဖန်ဆင်းသောသူတို့အားအသုံးပြုသူများကိုပြသပါလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်လူတစ်ဦးမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: လူ့ VK စာရင်းသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
စာမျက်နှာ "ကုန်စည်" သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့အကဲဖြတ်လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အပြုသဘောအနေနဲ့သင့်လျော်တဲ့အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားဖြင့်နေရာချထုတ်ကုန်သိုလှောင်ဘို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ VC ကိုမှပစ္စည်းကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
မီနူးကို item မှ switching အားဖြင့် "Links များ"သင်, စာမျက်နှာမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုပ်ရပ်များအပေါ်တိုက်ရိုက်မှီခိုသောအရာများ၏ content ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုသုံးပြီး "link တစ်ခု Add"သငျသညျဥပမာအားဖြင့်, ရပ်ရွာသင် subscribe ချင်, ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာမှပေမယ်သာ VC ကိုအတွင်းပါဘူးဖို့ရာအသစ်ပစ္စည်းများစေနိုင်သည်။
အဆိုပါတင်ပြသည့်အကြောင်းအရာများ၏နောက်ဆုံး "ဆောင်းပါးများ" မီနူးမှဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့မရှိ, အကြောင်းအရာတစ်ခုသင့်လျော်သောအမျိုးအစားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
စာမျက်နှာအသစ်ဒြပ်စင်များ၏ထို့အပြင်စဉ်အတွင်း "ဆောင်းပါးများ" သငျသညျပြန်ဖွင် mode မှာပစ္စည်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ခလုတ်ကိုအသုံးပြုရမည် "bookmarks ကိုမှသိမ်းဆည်းပါ".
လိုချင်သောဆောင်းပါးမှတ်တမ်းတင်အတွက် Laika Installing ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဓိက menu ရဲ့အပိုင်းအကြောင်းအရာထည့်သွင်းဖို့စဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအပြင်, ပိုကောင်းတဲ့အသီးအသီးကိုကိုယ်စားပြု bookmarks ကိုအပိုင်းရဲ့ features တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ site ပေါ်တွင်အခြားဆောင်းပါးများဖတ်ပါသင့်တယ်။ ၎င်း၏မျှမျှတတအသေးစိတ်လေ့လာမှု, သင်စာမျက်နှာကနေအချို့မှတ်တမ်းများစွန့်ပစ်ခြင်း၏နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ် "Bookmarks".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: bookmarks ကို VC ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဒါကလူမှုရေးကွန်ရက် VKontakte ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် bookmarks ကိုကြည့်ရှုဘို့ညွှန်ကြားချက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပြဿနာများသို့မဟုတ်တတ်နိုင်သမျှဖြည့်စွက်၏အမှု၌, အောက်ကပုံစံဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: How to practice effectively. .for just about anything - Annie Bosler and Don Greene (စက်တင်ဘာလ 2019).